Ithegi: amabhaso | Martech Zone
Lwesine, Matshi 9, 2017 Lwesine, Matshi 16, 2017 Douglas Karr
Iinkampani zonxibelelwano noluntu zihlala zikhangele ukwakha ulwazi kunye nokufumana udumo kubathengi bazo. Isicwangciso esinye esiliqili kukunikezela ngeengxelo. Amabhaso anezibonelelo ezininzi ngaphezulu kwe-pitch yomthengi ophakathi: Amabhaso abonelela ngokutya kweendaba ezilungileyo kwiingcali ze-PR zokufaka iindaba neepropathi. Iindawo zokuwonga kunye nemiboniso zihlala zihanjelwa ngabaphulaphuli abafanelekileyo, ukwandisa ukufikelela kwakho. Iindawo zokuwonga zihlala zisebenzisa iijaji ezinempembelelo enkulu, ke ukufumana uphawu lwakho ngaphambili
NgoMgqibelo, Oktobha 1, 2016 Douglas Karr
Le vidiyo ibhaso ye-spoof imnandi. Eyona nto ihlekisayo ihlala ibonakala ngathi inyanisekile, kwaye ukuhanjiswa kwamabhaso ngokuqinisekileyo kuyahlekisa. Andiyiyo imbasa yokukhupha Poooot iyonke; Ndiyakholelwa ukuba ukwamkelwa kweshishini kunyanzelekile. Inika ubungqina begunya lakho kwaye yakha ulwazi kubaphulaphuli abafanelekileyo. Sinearhente yobudlelwane noluntu engaqhelekanga esisebenza nayo. Bazalise izandla zethu kuthi, betyhala imveliso yethu (le mpapasho) njengesixhobo, intengiso yethu yedijithali